Magacaabista & shaqo ka erida uu sameeyay Raysal wasaaraha ma ahan sharci sidaas waxaa yiri…. |
Magacaabista & shaqo ka erida uu sameeyay Raysal wasaaraha ma ahan sharci sidaas waxaa yiri….
-Guddoomiyihii guddiga dastuurka KMG ah ee dalka Cabdiqaadir Sheekh Ismaacil ayaa sheegay in tallaabada uu sameeyay ra’iisal wasaaraha ee shaqada uu uga eryay taliyaha booliska iyo agaasimihii hey’adda nabad sugida uu yahay mid sharci darro ah.
Wuxuu ku sababeeyay arrintaas maadama uusan lahayn tallaabadaas in uu qaado ra’iisal wasaaraha oo waxaa ciidamada ugu sareeya ayuu yiri madaxweynaha isaga ayaana la rabay in uu eryo taliyaha booliska iyo agaasimaha nabad sugida haddiiba siddaas wax la yeelayo.
Cabduqaadir Sheekh Ismaacil ayaa xusay in ra’iisal wasaaraha uu jebiyay qoddob dastuuri ah oo haddii aan degdeg looga hortagin abuuri kara khalkhal siyaasadeed iyo khilaaf hor leh oo la soo darsa madaxda dowladda.
Wuxuu kaloo sheegay in tallaabada uu qaaday ra’iisal wasaaraha uu muujinayo in ay jiraan khilaaf ka dhexeeya madaxda dowladda sidda ra’iisal wasaaraha iyo madaxweynaha sidda uu hadalka u dhigay.
Si kastaba, taallaabada uu qaaday ra’iisal wasaaraha ayaa timid markii xaley Shabaab ay weerar xooggan ku aaday halboolaha dowladda oo ah qasriga madaxtooyada waana markii labaad oo bishii May ayey ahayd markii horre oo ay ka dhex daagallantay Shabaab gudaha madaxtooyada oo dhowr saac ah ay ku jireen.
Waxaa muuqata dal-daloolo xagga ammaanka oo ka jirra Muqdisho tiiyoo ay jirto in Shabaab ay ku hanjabtay in ay dardar galindoonto howlgallada ay ka geesanayaan Muqdisho.
11-kii cisho ee la soomanaa waxay Shabaab Muqdisho ku dishay in ka badan 30 ruux oo isugu jirra ciidamo ka tirsan dowladda iyo dad wax tar u leh bulshadda.
Haddaba waxaa la is weydiinayaa isbadalka xagga ammaanka ee dhacay ma noqon doonaa mid oowda dulduleelaha muuqada ee dhinaca amniga.
Intagra no rx, acquire lioresal.